July Dream: Family Day
Posted by JulyDream at 10:53 PM
. .. မိုးစက်တွေ ကမ္ဘာမြေကို အပြိုင်အဆိုင် ခုန်ချနေတာကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးကလဲ အမှတ်တရပါပဲ။ မိုးစက်လေးတွေ အတန်းလိုက် အတန်းလိုက်ကြီး ပုလဲ ပုတီးကုန်းတွေလို့ သွယ်တန်း ရွာချနေတာကို အလွမ်းဓါတ်ခံလေးနဲ့ မြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်တာပေါ့ .. .
မှတ်ထားပြီး ကြုံရင် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
ရဟတ်ကြီးက လှတယ်နော်။ ရှုခင်းတွေကလည်း လှလိုက်တာ။ စင်္ကာပူတောင် လာလည်ချင်သွားပြီ။ ကျေးဇူးပဲနော်။ ရှယ်ပေးလို့။
Singapore TV တွေမှာ ပြသလို စော်နဲ့ အတူတူ ဘာညာလုပ်လို့ မဖြစ်ကြောင်း သိသာအောင် ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ ဦးလေး။ စော်နဲ့ ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ အဲဒီကို မသွားတော့ဘူး။
Singapore TV တွေမှာ ပြသလို ကောင်မလေးနဲ့ ၂ ယောက်တည်း စီးလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ သိရအောင် ဓါတ်ပုံ အထောက် အထားများ နှင့်တကွ ပြသခြင်း အတွက် အထူးကျေးဖူး တင်ရှိပါကြောင်း။
အဲဒါ ကြီးကို ချားလို့ ခေါ်တာ မဟုတ်လား။ စင်ကာပူမှာ ရှိတဲ့ အကြီး ဆုံးချားကို စီးတာပေါ့နော်။
နှင်းဆီနီနီရေ... ကြွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှတာပါ။
ရွှန်းမီရေ... ရွှန်းမီ စီးတဲ့အခေါက်မှာ မိုးရွာပါစေဗျာ။ ဒါမှ မိုစက်တွေကို မြင်ခွင့်ရမှာ။
ဂျပန်ပြည်က megumi ရေ... လာလည်ချင်ရင် လာလည်ပါ။ လည်ပတ်စရာ များများစားစား မရှိဘူးနော်။
ဖြိုးငယ်ရေ... ပျော်စရာကြီးဆိုတာထက် ရှုခင်းတွေကို ကြည့်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က ကြည့်ရတာနဲ့ မတူဘူးလေ။
ဗိသုကာ ဆရာကြီး သန့်ဇင်ဦးရေ... အကြီးဆုံး ရဟတ်ကိုပဲ စီးတာပါ။ ချားစီးတာ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျ။
အဲ့.. ဟုတ်ဘူးး.... ရဟတ်..ရဟတ်.. ရဟတ်စီးမယ်.. ရဟတ်စီးမယ်..လိုက်ပို့လိုက်ပို့.. ဟီးးးးးးးးးးး... :D
Go and ride Singapore flyer on company family day? Arr... are you working in Y3 or YCH??
ကိုရင် ရေ... ခင်လေးငယ်က ချားစီးမယ် ဆိုပဲ။ သြော် စောရီး စောရီး... ရဟတ် စီးမယ်လို့ ထပ်ရေးထားတာ တွေ့ပြီ တွေ့ပြီ။ ကဲ... ရဟတ်ကြီးဆီ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါဗျာ။
ဒီလိုနေရာမျိုးကို အလုပ်က ပို့လို့ ရောက်ခဲ့ရတဲ့ ၀န်ထမ်းပါခင်ဗျာ။ ရုံးချုပ်ဆိုတာက စင်္ကာပူ အနောက်တောင်မှာ တည်ရှိတဲ့ ရထားမရောက်တဲ့ နေရာကပေါ့ဗျာ။
Ha ha...like the way you describe the location of Head office. How is wx3, tx3 project?
I know that the ppl working there are nice even though there arealot of indian. I miss KK, JL, LK, SH, Ian and many more...ha ha....I think u may know them if u working in IT department....Is James still COO there? lol
လန်ဒန်က စလိုက်တဲ့ ရှူခင်းကြည့်တဲ့ ရဟတ်ကြီးတွေ စင်ကာပူမှာလဲ ရှိသကိုး
London eyes လို့ခေါ်တယ် ။ အတုခိုးရင်လဲ နာမယ်ပါ အတုခိုးတာ မဟုတ်ဘူး ခုတော Singapore Flyer တဲ့
ဒီမှာတော့ Tourist တွေပဲစီးတာပါ ကိုယ်တို့က ဌာနေတွေဆိုတော့ စီးဖို့မလိုဘူးလေ